သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ရုပ်ရှင်လက်မှတ်လေးနှစ်စောင်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:38 AM
မအိမ့် ဒီစာကို တစ်နေရာမှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သံလွင်မှာ လား အိပ်မက်မှာလား မသိဘူး။h အဲဒီတုန်းက လည်းကြိုက်တယ် လို့ မှတ်မိနေတယ်။ ခုထပ်ဖတ် ပြန်တော့လဲ ဖတ်လို့ ကောင်းတုန်း ပါပဲ :)
ကောင်းလိုက်တာဗျာ.. တစ်ခါတည်း ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ကို လုလိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ လာ မအိမ့် ၊ ဒီကောင် မအိမ့်နှင့် မကြည့်တော့ဘူးဆို၊ ကျွန်တော် နှင့် သွားကြည့်မယ်လို့ အားပေးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်ဗျာ..
အစ်မရဲ့ ခြင်္သေ့ကျွန်းက ချစ်သူကို ကျွန်တော် သိသလိုပဲ။ အရပ်ရှည်သလား။ :P သူ့မိန်းမက ပုတယ်လေ မှားရင် ထားလိုက် မှန်ရင် အကြောင်းပြန် :D
ပုံရိပ် နဲ့ မင်းမင်းရေ.. အားပေးတာကျေးဇူးနော်…
ကိုစိုးဇေယျ.. ဟင်းဟင်းဟင်း.. လေဘယ်လ်တပ်ထားတယ်.. ဒါဝတ္ထုနော်..
ကိုစိုးဇေယျမသိပဲ ရောချပါတော့မယ်။ ဟွန်းဟွန်း
ကျွန်တော်Cast away ကြည့် ခဲ့တာကြာလှပေမယ့်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ကလေးနှစ်စောင်ဖတ်ပြီး Chuck Noland(Tom Hanks)ရဲ့ ကားမောင်းထွက်သွားတဲ့လမ်းကလေးကိုပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။It's touchy and can feel with you Ma A.C.Myay
ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ မချစ်ဖူးတာထက်စာရင် ချစ်ပြီးလမ်းခွဲလို့ လွမ်းရတာက ပိုကောင်းတယ်တဲ့။ (ကျနော်ဖတ်ဖူးတာ)
အဲဒီ အလွမ်းတွေ၊ အမှတ်တရလေးတွေ ဆိုတာကလည်း ဘ၀ရဲ့ကောင်းသော မှတ်တိုင်လေးများပါ မအိမ့်-
ဘယ်နှစ်ခါ ဖတ်ဖတ်.. ဖတ်လို့ကောင်းနေတုန်းပါပဲ.. တစ်ပြည်သူ..
ချစ်ရသူနှင့် ပေါင်းဖက်ပြီး ဘ၀ရည်မှန်းချက်တွေ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရင်တော့ ဘ၀တစ်ခုလုံး ရှုံးနိမ့်ရုံသာမက သံသရာအထိပါ ရှုံးနိမ့်တော့မှာပဲလေ..
ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးဆက်တွေလည်း လူလုံးမလှ ဖြစ်ရတော့မယ်. ဒါကြောင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်ခဲ့ချင်ဘူး.
မင်းအထင်မှာတော့ ငါဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်ပေါ့
ငါကတော့ ငါ့ရဲ့ ခံစားချက်ကို ချိုးနှိမ်ခဲ့ပြီး လုပ်သင့်တာတွေကို ဦးစားပေးလုပ်ခဲ့တယ်.
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စူးနင့်အောင် ချစ်မြတ်နိုးကြပါလျက်နဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ်ရည်ရွယ်သလို ဖြစ်မလာတတ်တာ၊ ဖြစ်မလာနိုင်တာတွေ၊ မပေါင်းဖက် မဆုံဆည်းနိုင်ကြတာတွေလည်း ရှိတတ်သေးတယ်.
ငါနဲ့မင်း အဖြစ်အပျက်က အဲဒီ့မြောက်မြားလှစွာသော မဆုံဆည်းနိုင်ခြင်းတွေထဲက တစ်ခုပဲပေါ့
မင်းနဲ့ငါအတွက်ကတော့ ဘ၀တစ်သက်တာ ရင်းလိုက်ရတယ်.
မင်းခံစားရသလို ငါလည်း ကြေကွဲတယ်.
တုတ်တုတ်မလှုပ်တော့တဲ့ နှလုံးသားထဲက ပလတ်စတစ်ရင်ခုန်သံတွေကို
အောင်မြင်စွာ ရှုံးနိမ့်တတ်ခဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲလေ…
အစ်မရေ့ ကျနော်ယူသွားပြီး ရတယ်ဟုတ် မောင်နှမချင်းချင်းတွေ =)